Nekuvandudzwa kwehunyanzvi hwekuchenjera hunyanzvi uye shanduko nyowani muindasitiri yekutengesa, makambani mazhinji atanga kugadzira kana kushandisa macarget anotenga engoro. Kunyangwe ngoro yekutenga yakangwara ine zvakawanda zvinobatsira zvekushandisa, inodawo kutarisisa zvakavanzika uye zvimwe zvinhu. ...
Multi-chinangwa Shopping Cart, Iwe Unofanirwa Iyo
Multi-chinangwa chengoro yekutengesa, yakakura kugona, inogona kugara uye kupetana, inodiwa zvikuru nevatengi! Nekuvandudzwa kwemaitiro ehupenyu, izvo zvinodiwa nevanhu zvehupenyu hwomukati zvakare zvichikwira, izvo zvakare zviripamusoro ...
Mashandisiro Aungaita Basket rekuTenga Uye Shopping Cart Zvakakodzera
Nekufambira mberi kwenzanga, hupenyu hwedu hwawedzera uye huri nyore. Kana iwe uchida kutenga miriwo, michero, machira ekuwacha uye nezvimwe zvinodiwa zvezuva nezuva, unogona kugadzirisa matambudziko ese nekuenda kuchitoro chikuru kune denderedzwa. Asi unoziva here? Iyo supamaketi ndeyechokwadi yakakura kwazvo sosi yehutachiona ...